Liban: manohana ny fanoherana ny “Pinochet Arabo” ny mpitoraka bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2011 12:13 GMT
Niray feo tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Tonizia izay araka ny heno hatreto aloha dia olona 24 no maty ireo mpitoraka bilaogy any Liban.
Fanehoana fiaraha-miory sy fanohanana ny tanora avy any Tonizia izay manohitra ny jadona sy ny kolikoly ary ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny filoha Zine el Abidine ben Ali, fantatra amin'ny anara-petaka hoe “Pinochet Arabo” nomen'ilay mpitoraka bilaogy avy any Liban Angry Arab.
Nanomboka ny fanoherana taorian'ny fikendrena ilay tanora 24 taona, Mohamed Bouazizi, izay tezitra vokatry ny fitomboan'isan'ireo tsy an'asa, ny fiakaran'ny vidin'entana ary ny kolikoly ataon'ny fanjakana.
Manaraka ny fizotr'ity olana goavana indrindra nahazo an'i Tonizia tato anatin'ny taona maro ity ny tontolo Arabo, ary Arabo marobe no miombona alahelo amin'ny amin'ny fahakiviana iainan'ny mpanao fihetsiketsehana.
Rita Chemaly nanoratra zavatra mafonja tao amin'ny bilaogy hanohanany ny mpanohitra:
Miverimberina eo ny sary rehetra,
Jereko ny Al Jazeera,
Avadiko indray, hijerena ny ao amin'ny CNN, Euronews, avy eo France 1, 2, 3 sy M6,
Jereko koa ny fahitalavitra avy any Liban, saingy …
Sary manjavozavo “bala tena izy”, no misetra ireo mitaky ny sakafony anio sy ny sakafony andavanandro!
Faty olona, ministry ny fifandraisana milaza fa mety sady manokatra fifampiresahana, ny tena ratsy, io olona io no manambara hoe : tsy mankasitraka herisetra izahay!
Izay indrindra, io ministra io no milaza izany kanefa misy ny faty olona!
Ho anao Ramose : fantatrao fa ny mitifitra akaiky tanora mpianatra, tanora mitaky ny haniny isan'andro, mitolona ho amin'ny asany rahampitso, sy ny hoavin'ny rehetra, dia herisetra nataonao? Fandrarana azy ireo tsy haneho hevitra, tsy ho olom-pirenena ary tsy hiaina?
Niaina tany Liban aho tamin'ny fotoana nampandroana anay nandritra ny fitakianay,
Oh Liban tamin'izany fotoana izany, naraha-maso ny mpianatra, nenjehina, ary ny fandroana, aiza ianao izao, hanome lesona ho an'ity fanjakana mampiasa bala sy polisy ity, ary ny tafika ara-dalàna ao aminy manao fahirano ka misambotra ireo heverina fa mpanohitra ?
Mahereza ry namako any Alzeria, Ejipta fa indrindra ny any Tonizia!
Ny Angry Arab manakiana ny politikan'ny FMI ampihariny amin'i Tonizia izay heverina fa nampipoaka izao korontana izao:
“Tsy mazava ny ho avin'ny fitakiana hatreto. Ny fanjakana tarihan'i Ben Ali manao izay hifehezana ny raharaha amin'ny alalan'ny fandefasana mpitandro ny filaminana hanampy ny polisy any amin'ireo faritra misy fitakiana. Mitaky am-pilaminana ireo mpanohitra ary tsy mieritreritra mihitsy ny hanao herisetra na hamotika zavatra. Ireo mpitaky sasany mitondra tapa-mofo ary ny hafa kosa milanja sora-baventy mitaky asa sy fahamendrehana.
Mandritra izany fotoana izany, ampirisihan'ny FMI ny fanjakana any Tonizia hampihatra ny politikan'ny fitsitsiana amin'ny lafiny rehetra, ampirisihany ny fanjakana hampijanona ny fanampiana omeny ho an'ny sakafo sy ny famokarana solika ary hanavao ny rafitra ara-tsosialy, ny fanavaozana ara-taratasy ny fitantanam-bola ho an'ny beantitra sy ho an'ny tsy miankina izay ny ankamaroan'ny mpisitraka izany dia ny mahantra avokoa. Ny tena fihatsarambelatsihy goavana ao anatin'izany dia ny fampirisihan'ny FMI hanatontosa ny politika hanaingana ny tsenan'asa sy ny fampitomboana ny harinkarena dia ilay dika petaka ataony amin'ny firenena rehetra hanaovany fanadihadiana.”
Angry Arab manohy ny sorany momba ny fanoherana any Tonizia ary abaribariny fa mampiasa baomba mandatsa-dranomaso fampiasan'ny miaramila israeliana ny tafika any Tonizia hanoherany ny mpanao fihetsiketsehana:
“… Tifirin'ny baomba mandatsa-dranomaso ny Toniziana ary misy soratra amin'ny teny hebreo amin'izy ireny izay manamarika fa avy any Isiraely ireny baomba ireny. Ohatry ny azo inoana ihany fa misy fifandraisana miafina ao. Ankehitriny fantatray hoe avy aiza no hanafaran'ny fanjakana ny baomba mandatsa-dranomaso. Amin'ny teny anglisy ny soratra hita eny amin'ny baomba sasany ary fampiasa amin'ny biby. Izany no fomba fitondra ny Arabo! Tsy mila fampianarana avy any an-kafa ny fanjakana amin'ny fomba famonoany ny mponina ao aminy, fa maka tahaka ny herisetra fanaon'ny Isiraeliana amin'ny Palestiniana fotsiny izy ireo, Palestiniana maty rehefa voatifitra amin'ny baomba mandatsa-dranomaso.“
Beirut Spring milaza ny korontana any Tunisie, Algérie, Egypte, Jordanie ary Koweit ho toy ny “fitotongan'ny Arabo”, ary manontany raha hiaina hestika tahaka izao koa i Liban :
Inona no ifandraisan'ny mpanohitra any Tonizia, ny fipoahana tany Alexandrie, ny korontana any Jordania ary ny krizy politika any Koweit?
Marc Lynch manlotra izao manaraka izao:
“Ireo tranga-javatra efatra heverina ho tsy mitovy nitranga tato anatin'ny volana ireo no mahatonga antsika hijery ny faharavana haingana eo amin'ny lalam-panorenana fototra sy ny fahapotehana ara-tsosialy any amin'ireo firenena antsoina hoe : “mpanaraka ny nentin-drazana” nampiharina tany amin'ny firenena Arabo Tatsinanana. Ny mampitovy ireo tranga efatra ireo, na dia tsy mitovy tanteraka aza, dia ny fampiharana ny jadona, fampanantenana poakaty, ny fitomboan'ny fahatezeran'ny olona, ary ny tahotra tsy mitsaha-mitombo amin'ny taranaka mihabetsaka hatrany”
Ny tena mahaliana ahy amin'izany rehetra izany dia ny tsy fisian'ny korontana sosialy mifandray amin'ny politika aty Liban. midika ve izany fa ny rafitra aty amintsika dia ahitana fifandanjana eo amin'ny tolotra sy ny tinady ka miteraka rafitra sosialy matanjaka kokoa?
Manohitra ny Toniziana, ampian'ireo korontana any amin'ny firenena Arabo hafa, dia marika maneho mazava tsara ny tsy fahafalian'ny Arabo amin'ireo mpitarika politika ao aminy. Amin'ny ady fanoherana tahaka izao, mahazo namana sy mpanara-dia ny Toniziana manerana ny faritra rehetra, anisan'izany koa i Liban.